သေပြီလို့ ဆရာဝန်တွေ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ရင်ခွဲရုံရောက်မှ အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ အမျိုးသား – White Sone
သေပြီလို့ ဆရာဝန်တွေ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ရင်ခွဲရုံရောက်မှ အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ အမျိုးသား
သေပြီလို့ ဆရာဝန်တွေ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ရင်ခွဲရုံထဲရောက်မှ အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ ကင်ညာနိုင်ငံက အမျိုးသား..
သေဆုံးခဲ့ပြီလို့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အတည်ပြုမှုကို ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ကင်ညာအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ရင်ခွဲရုံအတွင်း ရုပ်အလောင်းကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးနေချိန်မှာ ပြန်လည်သတိရလာခဲ့ပြီး အသက်ရှင်သန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အတည်ပြုချက်ကို ရရှိအပြီး ၃ နာရီအကြာမှာ ပြန်လည်သတိရလာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ပီတာကီဂျန်လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားဟာ အင်္ဂါနေ့က သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ရုတ်တရက် လဲကျခဲ့ပြီး ဆေးရုံကို အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေဆုံးသွားပြီလို့ မှတ်ချက်ပြုအပြီး ရင်ခွဲရုံကို ပို့ဆောင်ထားခဲ့ကာ ညာဘက်ခြေထောက်ကို ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက လိုအပ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ နာကျင်မှုဒဏ်နဲ့အတူ ပြန်လည်နိုးထခဲ့ကာ အလန့်တကြားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကီဂျန်ဟာ အစာအိမ်ရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူက Standard သတင်းစာကို ပြောဆိုခဲ့ရာမှာ သူနာပြုဆရာမက လူနာဟာ သေဆုံးခဲ့ပြီလို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ပြန်လည်ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ကီဂျန်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကလည်း ဝန်ထမ်းတွေဟာ လူနာကို ပေါ့ပေါ့ဆဆစစ်ဆေးပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရင်ခွဲရုံကို ရောက်ရှိပြီးနောက် ဝန်ထမ်းတွေက ကီဂျန်ရဲ့ ညာခြေထောက်ကို ဖော်မလင်ဆေးထိုးနှံဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြချိန်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရပြီးနောက် ပြန်လည်သတိရလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးနေသူတစ်ဦး ပြန်လည်ပြီးနိုးထလာခဲ့တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေဟာ ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြကာ ဆေးရုံကို အကြောင်းကြားခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကီဂျန်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရသေဆုံးမှုဌာနကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ကီဂျန်က သူ ပြန်လည်ပြီး ရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့မိသားစုကတော့ ဆေးရုံရဲ့ ပေါ့ဆမှုအပေါ်မှာ တရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပြီး ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
(၆) နှစ်သားကတည်းက နှာခေါင်းထဲဝင်ခဲ့တဲ့ အကြွေစေ့ကို နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော်မှ သတိရပြီး ပြန်ခွဲထုတ်
ဆွဲပြားလေး နှစ်ခု နှင့် ကံကြမ္မာကြောင့်လား ယုံကြည်မှုကြောင့်လား အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တဲ့သူ
အမေရိကန်သမ္မတ ဘိုင်ဒန် တောင်ကိုရီးယားကို လာရတဲ့ အဓိက...
နိုင်ငံပေါင်း (၁၁) နိုင်ငံထိ တွေ့ရှိလာတဲ့...
ထူးဆန်းတဲ့ မျောက်ကျောက်‌ရောဂါ အမေရိကန်၊ ‌ဗြိတိန်နဲ့...
လန်ဘော်ဂီနီကားကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိခဲ့တဲ့...
ကိုရင်များကို လှူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းများထဲတွင် အဖော်များ...
အသံထက် (၅) ဆပိုမြန်တဲ့ ဒုံးကျည်ကို စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှု...
Copyright © 2022. Created by whitesone.